Go'itaankii xayndaabka Larsen C ee Antarctica way dhowdahay | Saadaasha Shabakadda
Go'itaankii xayndaabka Larsen C ee Antarctica way dhowdahay
Sida ku xusan qodobbada kale, xasilloonida Antarctica waxay muhiim u tahay cimilada meeraha. Kulaylka adduunka, celceliska heerkulka meeraha oo dhan wuu sii kordhayaa, iyadoo ay saameyn ku yeelaneyso dhalaalka koofiyadaha barafka, labadaba Pole North iyo qaaradda barafaysan.
Maalmo uun ka hor, baraf weyn oo ku yaal Antarctica ayaa dillaacay heerkulku kordhayo awgood. Gurigu wuxuu qiyaastii gaarayaa 5.000 kiiloomitir oo laba jibbaaran aagga wuxuuna ku fadhiyaa shelf-ka barafka ee Larsen C. Darnaanta kala go'naanta balooladan ayaa ah, baaxadda ay leedahay awgeed, waxay waligeed beddeli kartaa khariidadda cidhifka koonfureed.
1 Goynta go'da ee Larsen C
2 Mashruuca Midas
3 Muhiimadda jabka
Goynta go'da ee Larsen C
Si loo xuso halista arrinta, waxaan marka hore tixraaceynaa labada miisaan ee aragtida dhacdadan: miisaanka aadanaha iyo cilmiga dhulka. Joogsiga ugu horreeya, goos gooskan iyo isbeddelkani wuxuu bilaabmayaa inuu u jiheeyo Antarctica dhanka burburka ee qunyar socodka. Si kastaba ha noqotee, marka loo eego miisaanka cilmiga dhulka, tani waxay ku dhacaysaa hal il oo ka kooban isha.
In ka badan 30 sano ayaa laga digay taas qaybta galbeed ee Antarctica ayaa bilaabatay inay dhalaasho. Marka laga reebo kor u kaca heerkulka adduunka ee ay sababtay isbeddelka cimilada, inta badan godka ku jira lakabka ozone ayaa sidoo kale laga helaa Antarctica. Arrimahan ayaa keenaya in Antarctica ay ku dhalaasho boodbooyin iyo soohdin.
Guriga weyn ee loo yaqaan 'Larsen C' ayaa go'aaya oo ka soocaya qeybaha kale ee shelf tanina waxay noqon kartaa horudhaca burburka qaaradda qabow. Haddii xayndaabka Larsen C gebi ahaanba la gooyo, magaalooyin badan oo xeebeedyada adduunka ayaa daadad qaadi doona. Cidhifyada Larsen C block ayaa ku dhalaalaya si dhakhso leh, sida haddii ay ahaayeen derbiyada qalcad ciid ah. Gudaha gudihiisa waxaa ku yaal nabarro sababa dildilaacyo aad u waaweyn oo gaara 400 mitir murabac.
Tilmaamaha kuleylka ee aagagga Antarctic wuxuu ahaa biyaha Badda Amundsen. Tobanaankii sano ee la soo dhaafay kululeeyey in ka badan 0,5 ° C, tanina waxay keentaa koror ku yimaad heerka uu barafku ku dhalaalayo oo ku jabayo. Intii u dhexeysay 2015 iyo 2016, baraf weyn oo qiyaastii gaaraya 360 kiiloomitir oo laba jibbaaran ayaa kala jabay, isagoo ka dhaqaaqay xeebta badda. Saadaasha heerkulku wuu kordhayaa, xaaladdan oo ah Wenddell Sea oo ku dhaw Larsen C, celcelis ahaan 5 ° C. Tani waa sababta keentay in qaar badan oo ka mid ah khaanadaha yaryar ee barafka gebi ahaanba dhalaalaa.
Haddii tani sii socoto, baarka Larscen C wuxuu noqonayaa barafkii ugu weynaa ee taariikhda la diiwaan geliyo. Waxay lahaan laheyd dusha sare oo la mid ah ismaamulka Beesha Cantabria.
Mashruuca Midas waxaa soo saaray koox cilmi baaris wadajir ah oo ka socda Jaamacadaha Swansea iyo Aberystwyth. Mashruucu wuxuu darsay oo uu soo gunaanaday in saameynta ka dhalatay dildilaaca guriga dartiis, kala-go'idda buur-barafka la filayo inay dhacdo dhowaan. Markay si lama filaan ah u hadlaan, waxay dhahaan waa arrin toddobaadyo, maaddaama dildilaaca uu durba qaatay 90 ° oo leexasho tanina caadiyan waxay u horseedaa jab.
Muhiimadda jabka barafka Larsen C ayaa ah in barafka qarka u fuulaya lagu dejiyo jasiirado taxane ah. Si kastaba ha noqotee, shelf-ka barafka intiisa kale wuxuu ku yaalaa berkad dhererkeedu dhan yahay 5.000 km tanina waxay ka dhigeysaa mid u nugul cimilada badda ee sii kordheysa. Markaa haddii barafka Larsen C uu dhalaaliyo oo uu dhaco wuu dardargelin karaa dhalaalida inta kale ee shelf iyo heerka ay sidaas ku sameynayaan, Waxay kor u qaadi lahayd heerka badda seddex mitir, fatahaadna ka dhigi doonta magaalooyinka adduunka oo dhan.
Dhulku wuxuu nooga digayaa cawaaqib xumada kululaaneysa dunida iyo go'itaanka Larsen C block waa digniin yar.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Isbedelka Cimilada » Go'itaankii xayndaabka Larsen C ee Antarctica way dhowdahay
Waa maxay fulkaanaha firfircoon ee Dunida?